October 4, 2019 – TechnoMag
Mobile data and internet usage has declined by a startling 8.2%, as consumer spending and inflationary pressure knock on salaries, this was revealed in the POTRAZ second quarter sector report. … Read More
The following are the main sector trends for the Second Quarter Abridged Sector Report of 2019, compared to the first quarter of 2019. A marginal decline of 0.1% in active … Read More
There have always been speculations when it comes to owning and flying drones in Zimbabwe. With the growing demand for drones in the country, there is a need to raise … Read More
Operational costs for Internet Access Providers (IAPs) in Zimbabwe went up to $111 million in the first four months of 2019 compared to $60million recorded in the previous quarter, latest … Read More
Potraz has pleaded with the government to slash taxation on the telecommunications sector to ensure digital inclusion. Potraz Director General Gift Machengete said the reduction of taxes will not only … Read More
Zim still needs 350 base stations for connectivity
ICT Minister Kazembe Kazembe says the country requires 350 additional base stations to attain 100% mobile network coverage. Currently Zimbabwe has a 8,884 base stations countrywide with 6246 of these … Read More